Hoobiye la soo saaray - Divenland
Naasaska, malaaska iyo hoobiye
Masonry iyo plastering madaafiicda oo ah qaybta ugu muhiimsan ee ganacsiga ka ganacsiga alaabada dhismaha, cellulose ether ayaa ka ciyaara door muhiim ah. Dameer wanaagsan waa inuu lahaadaa mid wanaagsan oo sahlan oo lagu dabaqo, jilicsan oo aan mindi lahayn, waqti ku filan oo lagu hawlgalo, oo ay fududaato in la simo; farsamaynta hoobiyeyaashu waa inay ahaadaan kuwo kufilan inay fududaato in la dabaqo, jilicsan oo aan mindi lahayn, waqti ku filan oo lagu shaqeeyo, fududaato in la gaadho; farsamaynta hoobiyeyaashu waa inay ahaadaan kuwo kufiican in lagu dabaqo, jilicsan oo aan mindi lahayn, oo ay fududahay heer; farsamaynta hoobiyeyaashu waa inay ahaadaan kuwo kufiican in lagu dabaqo, jilicsan oo aan mindi lahayn, oo ay fududahay heer; Mashiinka dhismaha madaafiicda waa inay ahaadaan kuwo kufilan heerkooda Dhismaha maanta, madaafiicda sidoo kale waa inay lahaadaan guryo fiican oo bamgareyn si looga fogaado suurta galnimada burburka hoobiyeyaasha iyo tuubbada tuubbooyinka. Jirka adag ee madaw waa inuu lahaadaa dhismo xoog leh oo heer sare ah iyo muuqaal dusha sare ah, xoog isu buuqis ah, cimri dheer, majiraan durdurro godan, dillaac la'aan.
Waxyaabaha haynta biyaha ee cellulose ether waxay yareeyaan biyaha ay nuugaan substrate-ka badan, waxay sare u qaadaan hawo wanaagsan oo ah walxaha jella, meelaha ballaaran ee dhismaha. Waxay si weyn u yarayn kartaa suuragalnimada burburka qallalan ee hoobiyaasha horumarsan iyo wanaajinta awoodda isku xirnaanta; awoodeeda adag waxay hagaajin kartaa qoynta hoobiye qoyan ilaa salka salka. Cellulose ether waxay dejisaa hooyga qoyan, waxayna yareyneysaa ama ka hortageysaa nabaad-guurka iyo sirta biyaha. Rheology iyo iska caabbinta oo yaraatay, sidaas awgeed waxay kordhisaa dhaqdhaqaaqa iyo yaraynta xoogga shaqaalaha. Waxyaabaha la beddelay ee loo yaqaan 'cellulose ether' waxay bixiyaan waxyaabo ka hortag ah oo muhiim ah marka la adeegsanayo hoobiyeyaal qaro weyn, taas oo yareyn karta waqtiga dhismaha isla markaana yareyn karta Qashinka.
MADAXWEYNAHA CIIDAMADA DIIWAANKA
Hilibka qoyan waa isku-dar ah sibidhka, isku-darka ganaax, isku-darka (inta badan celcellose ether), biyaha iyo waxyaabo kala duwan oo loo go'aamiyay iyadoo loo eegayo guryaha, marka loo eego saamiga cayiman, ka dib markii la cabbiro oo lagu daro goobta dhirta lagu qaso, ka dibna loo qaado meesha U isticmaal adiga oo isku daraya baabuurka, ku rid weel gaar ah oo wax lagu kaydiyo, isla markaana loo isticmaalo wakhti cayiman.
Marka la barbardhigo hoobiye dhaqameedka goobta isku dhafan, farqiga ugu weyn ayaa ah soo bandhigida hoobiye mashiinka qarxiyay, sida soo bandhigida taxane ah Max cellulose ether wuxuu noqon karaa iskuxirka hagaajinaya waxqabadka hoobiye, sidaasna hoobiye cusub uga dhigaya mid fudud in la isku daro, heerka biyaha haynta sare, masaafada dheer, dhererka weyn ka dib matoorka wali waxay leedahay wax qabad shaqo oo wanaagsan. Faa'iidooyinkeeda ugu weyn waa hufnaanta dhismaha oo sarreysa, tayada wanaagsan ee madaafiicda kadib markii la aasaaso, waxaana sabab u ah xawaare ballaaran oo bilowga ah ee madaafiicda markii la buufiyo. Sidaa darteed, waxay lahaan kartaa xajin amni leh substrate-ka, taas oo si wax ku ool ah u yareyn karta dhacdooyinka durbaanka godka.